ကျောင်းဖွင့်ချိန် အတွေး | မိုးချိုသင်း မှတ်တမ်း
အစ်မလည်း Augustine ကပဲကိုး။ ကျောင်းရှေ့က စစ်တပ်ကွင်းက ကျွန်တော်တို့တွေ ဘောလုံးကန်တဲ့ ကွင်းပေါ့။ အဲဒီကွင်းထဲကနေဖြတ် ပြည်လမ်းဘက်ကို ထွက်တာ Augustine ကျောင်းသားတွေ ကျောင်းပြေးတဲ့ လမ်းပေါ့။ ကျွန်တော်လည်း တစ်ခါတော့ ပြေးဖူးတယ်။ :D
အင်းနော်.. သမီးလေးသနားပါတယ်၊ မနီလာသိန်းအကြောင်းတော့ ကြားနေတာပါ၊
မမရေးတော့ ကျောင်းသွားအတူတူ ကစားအတူတူ ကျူရှင်တူတူ အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းကို လွမ်းလိုက်တာ၊ သူကတော့ အိမ်ထောင်ကျ ကလေးတွေနဲ့ ကိုယ့်ကို တခါတလေမှ သတိရမယ်ထင်တယ်
စစ်သားတွေ ရဲဘော်တွေ မွေးမြူရေးလုပ်တယ် ဟုတ်တယ်။
သူတို့ ဗိုလ်ချုပ်တွေအတွက် မပိုင်ဝက်မွေးမြူရေး။
များစွာသော ဘေဘီနီလာသိန်းတွေ အတွက် လူတွေ ဘယ်လောက် အသဲမာနိုင်ကြအုန်းမှာပါလိမ့်။
ဟိုက်... တကျောင်းထဲထွက်တွေပါလား မမမိုးချိုသင်းရေ ။
၆၄ အင်းယားလမ်း ။ဘေးချင်းကပ်ရက် က church ထဲမှာ မင်္ဂလာဆောင်တဲ့ အတွဲတွေ လိုက်ချောင်းဖူးတယ် ။တီချယ် ဒေါ်မြင့်မြင့်စိန် နဲ့ အက သင်တာ ..ဟိဟိ ဆရာမ တောင် လက်ဖျားခါသွားတယ် .. ဘယ်လိုသင်သင် မတတ်လို့လေ ..တီချယ် ဒက်ဖနီ နဲ့ မှီလိုက်သေးလားဟင်၊ ခုတော့ ကျောင်းသားဟောင်းတွေရဲ့ အာစရိယ ပူဇော်ပွဲ တွေ လုပ်သေးတယ် ။ ဒီဇင်ဘာ ဆို လုပ်တာများတယ် ။
Linn Zaw Win said...
I also miss the high school days when I've read your post. :)
Those days were really nice comparing to the university days.
မချိုသင်းရေ...တီတီစီ၊Augustine တို့ နဲ့ အတူ
ပုဂံလမ်း၊သထုံလမ်း နဲ့ခရေပန်းတွေ ကိုသတိရသလို၊ ကျော်မင်းယု ကိုလည်း သတိရ မိတယ်။
ဘာမှ မသိသေးတဲ့ ကလေးဘဝတုန်းကတော့ တကယ့်ကို ပျော်စရာကြီးပေါ့ဗျာ...
အရွယ်လေးနဲနဲရလာတော့မှ ဆရာတွေ မဟုတ်တာလုပ်တာ... လူကြီးတွေ မတရားတာလုပ်တာတွေ မြင်ပြီး... အန်ချင်စရာကြီးပါဗျာ...
သိနေတာထက်စာရင် တခါတခါ မသိတာပဲ ကောင်းဦးမလားလို့...
မချိုသင်းနဲ့တော့ သူငယ်ချင်းမဖြစ်လိုက်ရတာ နာတာပဲ...
မဟုတ်ရင်တော့ ကိုzt တို့ kiki တို့နဲ့ ချိန်းပြီး ဘောလုံးသွားကန်လို့ရတယ်
ဘယ်လိုဘဲ လူမသိအောင် သက်ပြင်းခိုးချပေမယ့်..
အမ ဟိုတလောက မမ kom စီဘောက်မှာ ကျောင်းဖွင့်ချိန် စိန်ပန်းပွင့်တာလို့ပြောတာကို သူတို့က ပိတ်ချိန်မှပွင့်တာလို့ ငြင်းတယ်။မမဆီလာမေးရအကောင်းသား။
ကျောင်းဖွင့် ချိန်တောင် ရောက်ပြီနော်...ကျောင်းနဲ့ဝေးနေထဲက ကျောင်းဖွင့်ချိန် ကျောင်းပိတ်ချိန်တွေကို.. သတိမထားမိတာကြာခဲ့ပြီ... ။ နောင့် တို့ရွာမှာ ကျောင်းတတ်ရတဲ့ ကလေးတွေ ကျောင်းဖွင့်ချိန်ဆို သနားတယ်...။ ဘာမှ ပြည့်စုံမှုမရှိပဲ..2မိုင်လောက် အကွာအဝေးကို လမ်းလျှောက်ပြီး သွားရတယ်..။ ဒီနှစ်လဲ ရွာမှာ ကျောင်းမအပ် နိုင်လို့ ကျောင်း မတတ်နိုင်တဲ့ ကလေး တွေ အများကြီးပဲတဲ့.. ။ ကိုယ့် တစ်နိုင်လေး တော့ (7)ယောက်စာ အတွက် ကျောင်း ထားပေးလိုက်ပါတယ်..။ ကျန်တဲ့ ကလေး တွေကို တော့ သနားရင်း..နဲ့ပဲ..
အစ်မ ရေ ရွှေပြည်ဌာန က ဘယ်တော့ သာပါ့ မလဲ ဟင် ..။
ချိုသင်းရေ… တို့ အမျိုးသားလဲ အော်ဂတ်စတင်းထွက်ပဲ… ဒါပေမယ့် သူက ၉ တန်းနဲ့ ၁၀ တန်း ၂နှစ်ထဲ အော်ဂတ်စတင်းမှာ တက်လိုက်ရတာပါ… ချိုသင်းတို့ နဲ့တနှစ်တော့မှီလိုက်လိမ့်မယ်… ဟိုတလောက မလေးရှားသွားတုန်းက စိန်ပန်းနီတွေတွေ့ တော့ ကျောင်းဖွင့်ချိန်ကို လွမ်းမိသေးတယ်… ချိုသင်းကျောင်းသွားဖော်ရဲ့တူမလေး ပျော်ရွင်စွာ မိသားစုလေးနဲ့ အတူနေရပါစေလို့ …
အစ်မရေ လာ၏ ဖတ်၏
ဒီအနာတွေ တစ်နေ.တော့ ကင်းစင်မယ်လို. ယုံကြည်နေ
လွန်ခဲ့တဲ့လက ၂၇ ရက်နေ.ကိုမျှော်မိတယ်
အခုတစ်ခါ သောကြာနေ. သတင်းကို စောင့်မျှော်ရပြန်ပါ ပြီ
အားလုံးအတွက် Good Friday ဖြစ်ပါစေလို.ဆုတောင်း နေပါတယ်
တနေ့တော့ ကျွန်တော်တို့ခေတ် ဒီမိုကရေစီခေတ် ရောက်ရမည်မှာ မလွဲပါဗျာ။ အတက်ရှိရင် အဆင်းရှိပါတယ်။
မုန်းတိုင်းပြီးရင် လောက ပင်လယ်ကြီးက ပိုလှသတဲ့.....
အမရဲ့ ကျောင်းဖွင့်ချိန်ကို ဖတ်ရင်း အရင်တုန်းက ကျောင်းသွားခဲ့ ရတာကို သတိရမိတယ်..ကျနော်တို့က အဒေါ်တာဝန်ကျတဲ့ မင်္ဂလာဒုံက ကျောင်းတွေမှာ တက်ခဲ့ရတာ.. ကျောင်းရှေ့မှာ စိန်ပန်းပင်ကြီးရှိတယ်.. အခုဆို မင်္ဂလာဒုံဘက်ကို ပြန်မရောက်ဖြစ်တာ အတော်ကြာပြီ..
အကျဉ်းချခံရသူတွေ အမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်နိုင်ပါစေ ..
နေ့စဉ်နဲ့အမျှ၊ အားလုံးအတူတကွ၊ ရှိနေကြပါတယ်။
မြန်မာပြည်ဟာ၊ ကျွန်တော့် နှလုံးသား။
ကျွန်တော့်နှလုံးသားဟာ၊ မြန်မာပြည်ပါ။ ဒါပေမဲ့၊ ကျွန်တော့် နှလုံးသား နာနေတယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အားလုံး ပျော်ရွှင်ပါစေကြောင်း၊
ကျွန်တော်၊ လွမ်းမောစွာ၊ ဆုတောင်းလိုက်ပါရစေ ..။
စိန်ပန်းတွေက တမြို့လုံး ရဲရဲနီနေပြီ ချိုသင်းရေ.. ဟိုတလောကတော့ မိုးတွေများလို့ မြေပေါ်မှာလဲ ကြွေတချို့ပေါ့လေ..။
သူရဲကောင်းတို့ရဲ့ သမီးငယ်လေး.. ဘ၀တွေနဲ့ရင်းပြီး ဂုဏ်ယူတတ်မှာပါ..
ချိုသင်းစာတွေက ဖတ်တဲ့သူတွေကိုပါ တခါတည်း ဆွဲခေါ်သွားတော့တာပဲနော်.. :)
ချိုသင်းရေ.. ဒီစာဖတ်ပြီး ၀မ်းနည်းလိုက်ရတာ...
ဗမာပြည်ရဲ့ ကံကြမ္မာက ဆိုးတယ်နော်...
ဆရာမ မမိုးချိုသင်းရေ... ကွန်မန့်ခုမှစရေးဖြစ်ပေမဲ့ ရေးသမျှစာတွေကို နှစ်ချိုက်စွာ ထာဝရအားပေးနေတဲ့ စာဖတ်ပရိတ်သတ်ပါ။ ဒီစာလေးဖတ်ပြီး ငယ်ဘ၀ကိုလွမ်းလွမ်းဆွေးဆွေး ဖြစ်မိတယ်။ အပြစ်မဲ့တဲ့ ကလေးလေးတွေ မြင်ယောင်ပြီး ၀မ်းနည်းမိတယ်။
စုလတ်တို့ မြန်မာပြည်ကြီး ဘယ်တော့များမှအေးချမ်းသာယာစွာ နေရပါ့မလဲနော်..
p.s အမကပျောက်နေတာကြာတော့ နေမှကောင်းရဲ့လားလို့ စိုးရိမ်မိသေးတယ် ...ကျန်းမာရေးတော့ဂရုစိုက်ပါအမရေ မကျန်းမာရင် စိတ်သွားတိုင်းကိုယ်ပါမလုပ်နိုင်ဘူးလေ..
ခုလိုတော်တာ Augustine ထွတ်မလို့ နေမှာ
SORRY, KO JIMMY AND HIS WIFE IS 65, AND DAUGHTER IS JUST A MONTH OLD. HOW THEY BIRTH ?
၆၅ နှစ်ဆိုတာ မတရား ပြစ်ဒဏ်ချခံရတဲ့ ထောင်ဒဏ် ကို ပြောတာပါ။ ကျမ ရေးတာ လိုသွားတယ် ထင်တယ်။
တခါမှ ကော့မန့် မပေးဖူးပါဘူး။
ဒီနေ့ တော့ ပြောချင်တယ်ဗျာ
ပေးတာတခြား ရတာတခြား အို အသင် ဘလော့လောကလို့ ။
လက်ကဆွဲလို့ အကို နဲ့ ယောင်းမကို
Whitey လေးကို စောင့်လျှောက်ရင်း
ဒို့Whitey ရဲ့ ၂ နှစ်မြောက်မွေးနေ့ အတွက်
T-Shit လေးရယ် Cindrella အရုပ်ရယ်
Birthday Card ရယ် ရောက်အောင်ပို့ 
သူ့ အမေကို သရက်ထောင်မှာ ပထမဦးဆုံး
ထောင်ဝင်စာ သွာတွေ့ တုန်းတော့ သူ့ အဒေါ်က
T-shit လေးကိုဝတ်ပေးသတဲ့ ......T-shit မှာ
Doll house ကပ်ခွာပုံလေးလဲပါတယ်........
အဲဒိတော့ Whitey က သူ့ ရဲ့ ကပ်ခွာပုံလေးကို
ကပ်လိုက် ခွာလိုက် နဲ့ သူ့ အမေကို ကြွားနေလေရဲ့ ..
အမေ နဲ့ သမီး တွေ့ ဆုံပုံ လေး ဝေဌ လိုက်တာပါ။
ချိုသင်းတို့ သူငယ်ချင်းတွေလဲ အမြန်ဆုံးပြန်လည်
ကိုဂျင်မီက ကျွန်တော်တို့လူငယ် အတွက် လေးစားစရာ အစ်ကိုကြီးတစ်ယောက်ပါ YuuWaThone ရဲ့ပြောပြချက်ကိုစိတ်မကောင်းစွာ ဖတ်သွားပါတယ်
ချိုသင်းရဲ့ ကျောင်းဖွင့်ချိန်အတွေးလေးက ငယ်ဘဝကို သတိရသေတဲ့ ကြည်နူးစရာတွေနဲ့ အတူတူ ကြေကွဲစရာတွေကိုပါ ယူဆောင်လာခဲ့လေတယ်...။
I closed my eyes after I read this. You bring back the images from analog to 1080p. I enjoyed walking on nice smooth asphalt pavement, until detour around the gate. I enjoyed it so much I quit taking "Ferry"(private run school Bus). Thank you for the memories. I miss my friends, San Oo and Kyaw Myint Aung.